ट्यूटोरियल नि: शुल्क र कार्ड बिना आईट्यून्स खाता सिर्जना गर्न आईफोन समाचार
एक छ एप्पल आईडी यो सिफारिश गरिएको छ यदि हामीसंग कुनै एप्पल उपकरण छ। हाम्रो आईट्यून्स खाताको साथ हामी अनुप्रयोगहरू, संगीत, पुस्तकहरू डाउनलोड गर्न सक्दछौं र हामी बिट्स १ सुन्न पनि जडानमा हाम्रा कलाकारहरूलाई पछ्याउन सक्छौं। थपको रूपमा, हामी सचेतहरू पनि कन्फिगर गर्न सक्दछौं, जस्तै कलाकारहरूले डिस्क छोड्दाको लागि सतर्कताहरू।
यि धेरै सेवाहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ एक भुक्तानी विधि सेट अप बिना। IBooks स्टोरबाट नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्ने, म्यानुअलहरू, वा २//24 एप्पल संगीत रेडियो धेरै उदाहरणहरू हुन्। यदि तपाईं एप्पल आईडी अनुप्रयोग स्टोरबाट नि: शुल्क सामग्री डाउनलोड गर्न चाहानुहुन्छ (अरू बीचमा), तपाईं यो म्याक वा पीसीबाट आईट्यून्स वा आईफोनबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यस गाईडमा हामी आईट्यून्सको साथ एप्पल आईडी कसरी बनाउने भनेर वर्णन गर्नेछौं।
1 ITunes को साथ एप्पल आईडी कसरी बनाउने
2 आईफोनबाट निःशुल्क आईट्यून्स खाता सिर्जना गर्नुहोस्
ITunes को साथ एप्पल आईडी कसरी बनाउने
यी चरणहरू हुन् जुन तपाईले अनुसरण गर्नै पर्छ तपाईको एप्पल खाता बनाउन कुनै क्रेडिट कार्ड बिना आईट्यून्स प्रयोग गरेर:
1 चरण: हामी खोल्छौं iTunes.
2 चरण: हामी एप स्टोरमा जान्छौं र एउटा खोजी गर्छौं नि: शुल्क अनुप्रयोग.
3 चरण: हामी क्लिक गर्दछौं पाउनुहोस्.
4 चरण: हाम्रो एप्पल आईडी प्रविष्ट गर्न एक विन्डो देखा पर्नेछ। हामी छान्छौ एप्पल आईडी सिर्जना गर्नुहोस्.
5 चरण: अर्को, हामी क्लिक गर्दछौं जारी राख्नुहोस्.
6 चरण: हामीले बक्सलाई चिन्ह लगायौं जुन हामीले सबै पढेका छौं र क्लिक गर्नुहोस् स्वीकार.
7 चरण: अब हामी सबै डाटा भर्दछौं र छोइन्छौं जारी राख्नुहोस्। यदि तपाईं प्रमोश्नल ईमेलको साथ चिन्तित हुन चाहानुहुन्न भने, दुबै बक्सहरू अनचेक गर्नुहोस्।
8 चरण: अर्को हामी भुक्तान विधिको रूपमा चयन गर्दछौं कुनै पनि छैन र हामी क्लिक गर्दछौं एप्पल आईडी सिर्जना गर्नुहोस्.
तार्किक रूपमा, यदि हामी एक भुक्तानी विधि कन्फिगर छैन, हामी सित्तैमा केहि पनि डाउनलोड गर्न सक्षम छैनौं। एकै साथ हामीले कुनै पनि डिस्क, पुस्तक वा भुक्तानी अनुप्रयोग डाउनलोड गर्ने प्रयास गर्दा हामीलाई क्रेडिट कार्ड, कोड वा आईट्यून्स गिफ्ट कार्ड प्रविष्ट गर्न सोधिनेछ। अन्यथा, लेनदेन को माध्यम बाट जाने छैन।
आईफोनबाट निःशुल्क आईट्यून्स खाता सिर्जना गर्नुहोस्
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने आईफोनबाट क्रेडिट कार्ड बिना नै तपाईंको आईट्यून्स खाता सिर्जना गर्नुहोस्, यस ट्यूटोरियलले कसरी तपाई नि: शुल्क अनुप्रयोगहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ भनेर वर्णन गर्दछ भुक्तान विधि निर्दिष्ट नगरी।
लेखको पूर्ण मार्ग: आईफोन समाचार » आईफोन » ट्यूटोरियल र म्यानुअल » ट्यूटोरियल नि: शुल्क ITunes खाता र तपाईं cds को कभरहरू डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ